रुनुको विकल्प रुनु भएको छ| Janachaso Khabar
उपत्यकाबाहिरको यात्राका लागि कलङ्‍कीतिर हान्निएको थिएँ । बुटवल पुग्नु थियो । साँझको समय । गाडीका लागि केही बेर कुरेँ । "बुटवल ! बुटवल !!" भन्दै डिलक्स बस आयो । सिट खाली छ भन्ने थाहा पाएपछि अविलम्ब चढिहालेँ तर बस भरिभराउ रहेछ । एक सिट खाली देखियो । सिट नं. 11-12 । त्यतैतिर पाइला लम्किए । झ्यालतिरको सिटमा एक जना स्त्री बसेकी थिइन् । कतै रिक्त सिट नदेखेपछि त्यहीँ बसेँ ।
बस कलङ्‍कीबाट हुइँकियो । सँगै गीत पनि घन्कियो, "सोचेजस्तो हुन्न जीवन....।" यात्राका क्रममा गीत सुन्दा पृथक् आनन्दानुभूति हुन्छ । यात्रालाई सहज र आरामदायी बनाउन पनि गीतको विशेष भूमिका हुन्छ । आँखा चिम्लेँ । सिटमा शिर राखेर गीतमा ध्यानस्थ भएँ।
गीतका तालमा हराएछु। गाडी मलेखु पुगिसकेछ। छेउकी स्त्रीसँग बोलचाल भएको थिएन। बोल्ने बहाना खोजेँ।
उनीतर्फ हेर्दै भनेँ, "कति छिटो मलेखु आइएछ है।"
"छिट्टै आएझैँ लाग्यो र ?" अविलम्ब प्रत्युत्तर दिइन्।
"गीतसँगै हराएछु म। त्यसैले त्यस्तो भान भयो।" मुस्कुराउँदै भनेँ।
"हे हे! कहाँसम्मको यात्रामा हुनुहुन्छ?" उनले कुरा लम्बाउन थालिन्।
"बुटवलसम्म ।" सटिक उत्तर दिएँ ।
"हजुर नि?" सोध्न विलम्ब गरिनँ ।
"म पनि बुटवलसम्म नै ।"
त्यसपछि निरन्तर कुराकानी भए। आफ्ना भाइ नभएका कारण उनले मलाई 'भाइ भन्छु" भन्ने आग्रह गरिन्। मैले पनि सहर्ष स्विकारेँ।
मानिस बाहिरबाट जस्तो देखिन्छ, भित्रबाट ऊ त्यस्तो नहुन सक्तछ। बाहिरी ओठको हर्ष कृत्रिमसमेत हुन सक्छ। त्यस्तै अनुभूति गर्न पुगेँ।
यात्रामा भेटिएकी दिदीले आफ्नै भाइ सम्झेर मनको बह पोख्न थालिन्, मनमा थुप्रिएको व्यथा र वेदनाको पोको।
"भगवान्‌जस्तो लोग्ने र स्वर्गजस्तो घर पाएर पनि म अभागी खुसी हुन सकिनँ।"
उनले अश्रुधारा बगाउँदै भनिन्,"दश कक्षासम्म पढुन्जेल एक रात पनि आमाविना सुतिनँ। आमाको अन्त्यले उठ्नै नसक्ने गरी पछार्‍यो। सिरानीलाई आमाकै चोलो र सारी लगाइदिएर साक्षात् आमा मानी अँगालो हालेर कैयौँ रात कटाएँ।
कुनै रात आमा आइन् भन्दै म उठेर एक्कासि ढोका खोल्न पुगेकी थिएँ तर आमा आइनन्। ममाथि बज्रपातको चट्याङ पर्‍यो। के भगवान्‌ले ममाथि न्याय गरे?"
उनका हृदयविदारक कुराले मलाई ब्रह्मास्त्र लागेको घाइतेजस्तै तुल्यायो। म बोल्नै सकिनँ। सुन्दै गएँ। सुनिरहेँ।
"विधुवा आमा र विदुर बुवामा धेरै ठूलो अन्तर हुन्छ।
विधुवालाई भन्दा विदुरलाई झन् गाह्रो हुन्छ बाँच्न।
विधुवा त महिला हुन्, एक्लै बसेर रोएर भए पनि आफ्नो वेदनालाई आँसुका रूपमा जन्म दिन्छन्, र मन हलुङ्गो बनाउँछन् ।
तर विदुर त पुरुष हुन्, रुन सक्तैनन्। आफ्ना वेदना र व्यथालाई मनमा गुन्द्रुक कोचेझैँ कोचेर राख्छन्, गुम्साउँदै बस्छन् तर कसैलाई भन्न सक्दैनन्। न त आफ्ना वेदनालाई रोएर पखाल्न सक्छन्। मुटुमा वेदनाले आगो बाल्दासमेत एक थोपा पनि आँसु झार्दैनन्। यो मेरा आफ्नै पिताको पारदर्शी दर्पण हो।"
उनको भनाइले मलाई फेरि घातक वाणले जस्तै मुटुको केन्द्रमै हान्यो । म होसमा हुँदाहुँदै पनि बोल्न नसकेर अचेत भएँ। उनी बोलीका माध्यमबाट रोइरहिन्। म पञ्चपाण्डवजस्तै निरीह भएँ, जो कौरवहरूले द्रौपदीको सारी खिचिदिँदासमेत लाचार दर्शक बनेर हेरेका थिए। म पनि उनी रोएको लाचार बनेर हेरिरहेँ, केही गर्न सकिनँ। नरोऊ भन्नसमेत सकिनँ।
"वर्षौँदेखि मेरो मनको कारखानामा गुम्सेका पीडा तिमीले अनुमानसम्म पनि गर्न सक्दैनौ। कैयौँ रात सिरानी भिजाएँ। प्रत्येक मीठा गाँससँगै आँसु निलिन्छ। झसक्क सम्झिन्छु- कतै बा भोकै पो छन् कि? उफ्फ मेरो जिन्दगी!
कसलाई पोखूँ हृदयमा थुप्रिएका वेदना र व्यथाका डङ्गुर?
पोल्छ, पोलिरहन्छ हिजोआज। यहाँसम्मकी मेरो आँसु पोख्ने ठाउँ पनि छैन। बुवाको काखमा शिर राखे पनि आँसु बगाउन सक्तिनँ। बुवालाई एक्लोपनले कोपर्दा म कसरी खुसी होऊँ?"
मेरा आँखा रसाइरहे। मलाई कुनै उपन्यासको कहानी सुन्दै छु जस्तो लागिरहेको थियो। उनका कुराले भतभती मुटु पोल्न थाल्यो। म स्तब्ध भइरहेँ, बोल्नै सकिनँ।
"आमा हुन्थिन् भने आमाको काखमा रोएर सारी भिजाइदिन्थेँ। मसँगै आमा पनि रुन्थिन् होला। तर म अभागी सिरानीसँगै रुन्छु, रिसानीले नरो भन्दैन। केवल मेरा आँसुको वर्षामा भिजिरहन्छ।
म आफू रित्तो लाग्छ। बुवालाई भेट्न प्रत्येक दिन तिर्खा लाग्छ तर भेट्न चाहन्नँ। फर्कने बेलामा बुवाका आँखाले 'नजा छोरी म एक्लै छु' भन्छन्। हातको स्पर्शले भन्छ, मलाई कसैको खाँचो छ। भन न आफैँ म कसरी जाऊँ?"
मेरो हृदयमा पुनः 'नारायण अस्त्र' आएर छेडियो, उनका हृदय क्षतविक्षत गराउने बोलीले। गालामा हात राखेर भुइँतिर घोप्टिरहेँ।
"अचेल झन् बुवाको यादले तड्पाइरहेको छ। तर बुवालाई भेट्न जान सक्तिनँ, गएपछि कसरी फर्कुँला भन्ने डरले। म किन छोरी भएर जन्मेँ? किन आमा गइन्, मभन्दा पहिले। म जानुपर्ने थियो ।
बिहानदेखि खुब रोएँ, लेखाजोखा छैन। नारीको जीवनसँगै नसकिने आँसु लिएर आएछु।
म सोच्छु, त्यो ठूलो घर। घरको पेटीमा गालामा हात राखेर बसेका एक्ला बा। झमक्क साँझ पर्छ तर कोही आउँदैन। निराश देखेर सोध्ने कोही छैन, के भयो भनेर। म कसरी रमाएकी हुँला, भन्न सक्छौ?
रुनुको विकल्प रुनु भएको छ। मेरो खुसी कहिल्यै फर्केर आउँदैन।"
आफ्नो पछ्यौरीले आँखा पुछ्दै भनिन्, "दश कक्षापछि आमाविना साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो निदाउन। मानौँ अनिदो मेरो घनिष्ट साथी थियो। बाबाले मेरो पीडा बुझे। आमाको भूमिका निर्वाह गरे। आफ्नो हातलाई मेरो सिरानी बनाइदिए। म आमा सम्झेर निदाएँ। अब भन आज बुवा एक्लै किन?
म हुनु र नहुनुको के फरक भयो र अब?"
मेरा आँखामा मौसमी झरी सुरु भयो। चस्मा खोलेँ। बिस्तारै आँसु पुछेर फेरि लगाएँ। म अवाक् छु, मानौँ आज मलाई बोल्नु नै हुँदैन।
"बग्छन् आँसु, तातेको तेलजस्तै पोल्दै र पनि म केही गर्न सक्तिनँ। मलाई कसैले बुझ्दैनन्। केवल बाहिर रमाएको देख्छन्।
जुन दिन आमा बिरामी भइन्, त्यस दिनदेखि प्रत्येक रात आँसुले भगवान्‌लाई रुझाएँ। आँसुकै जल चढाएँ। रातो टीका लगाएका ढुङ्गा देख्दा पनि आमालाई बचाइदिने भगवान्‌लाई नै सम्झेँ। अहँ, भगवान्‌लाई पनि मेरो आँसुले पुगेन, आमा नै खोसेर लगे।"
फेरि केही थोपा आँसुले तिलाञ्जलि दिए। उनीप्रति अनुहार फर्काउने हिम्मत पनि जुटेन मलाई।
उनी बोल्न छाडिनन्। आँसु पुछ्दै बोल्न थालिन्,"घरजम गरेर रमाउने बेलामा म कसैको एक्लोपनले पलपल रोइरहेकी छु।
आमा नभएपछि मैले आमालाई कैयौँ चिठी लेखेँ। बिन्ती गरेँ तर आमा आइनन्। न त आमासम्म चिठी पुर्‍याइदिने कोही भेटेँ।
यो सुरुवात होला, मैले जिन्दगीमा अझै धेरै रुनु छ।
मेरो यस हालतले देउताजस्ता श्रीमान्‌को खुसी पनि लुट्दै छु भन्ने आभास हुन्छ। खुसी हुन्छु तर अचानक बाको अनुहार याद आउँछ। कल्पनामा उनी रोएको देख्छु, मुटु फुटेर आउँछ।
म के गरूँ !
आमाले बच्चालाई जस्तै जिस्क्याए, हँसाए, फकाए तर आज म यता बा उता। म यता रुन्छु। बा उता रुँदा हुन्।
मेरा बा ! मेरा भगवान् ! एक्लै कैयौँ रात हत्केलाले आँसु पुछेर बिताइरहेका होलान्।"
सान्त्वना दिनेसम्म साहस थिएन ममा। एकोहोरो सुन्दै गएँ।
उनको व्यथा र वेदनायुक्त भोगाइ सुन्दै जाँदा बाटो कटेको पत्तै भएन। बिहान ५:१५ बजे बुटवल बसपार्कमा ओर्लिएर हामी आ-आफ्ना गन्तव्यतर्फ बाटो ततायौँ।
यो यात्रा जीवनकै अविस्मरणीय यात्रामा सूचीकृत भयो।